Wasiiro cusub oo kamid noqday Xukuumadda Soomaaliya , Akhriso magacaabista! – Hornafrik Media Network
Wasiiro cusub oo kamid noqday Xukuumadda Soomaaliya , Akhriso magacaabista!
By HornAfrik	 On Aug 5, 2018
Hornafrik-Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta waxaa uu magacaabay wasiiro cusub oo kamid noqonaya Golahiisa wasiirada., wasiirada la magacabay ayaa isugu jira wasiiro , wasiiru dowle iyo wasiir ku xigeen.
Wareegto uu soo saaray Ra’iisal wasaaraha ayaa waxaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya loogu magacaabay Cabdullahi Goodax Barre , wasiirka wasaardda diinta iyo owqafta ayaa sidoo kale waxaa loo magacaabay Shiikh Nuur Maxamed Xasan , wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa waxaa loo magacaabay Xuseen Shiikh Maxamuud Xuseen , Wasiirka kallumeysiga iyo kheyraadka badda ayaa loo magacaabay Cabdullahi Bidhaan warsame, wasiiru dowlaha madaxtooyada waxaa loo magacaabay Cabdulqaadir Shiikh Cali Baqdaadi iyo Wasiir ku xigeenka wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha oo loo magacaabay Shawaqar ibraahim Cabdalla
Wareegtadan ayaa waxaa warbaahinta u’aqriyay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waxaana ay dhaqan gashay isla maanta , iyadoo ay xusid mudan tahay in Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu maanta u baxay dalka Sudan oo ay booqasho rasmi ah uga bilaabatay.
R/W Kheyre oo safar dibadda ah u baxay.
Gaari laga buuxiyay walxaha Qarxa oo lagu weeraray saldhig ku yaala Afgooye!